« Quatre heures Honda 2019 »: hanala vela amin’i Ranty i Claudio Tida | NewsMada
« Quatre heures Honda 2019 »: hanala vela amin’i Ranty i Claudio Tida
Par Taratra sur 13/03/2019
Hotanterahina, ny asabotsy 16 sy ny alahady 17 marsa ho avy izao, eny amin’ny SRK Imerintsiatosika, ny «Quatre heures honda 2019». Fihaonana tsy tafiditra ao anaty fifaninanam-pirenena fa mijanona ho lalao tsotra fotsiny. Hiova endrika kely ity andiany faha-20 ity satria natao roa andro ny hazakazaka fa tsy iray andro, toy ny mahazatra hatramin’izay.
Hanala vela amin’i Ranty Ernest, nandrombaka ny fandresena tamin’ny taon-dasa, amin’ity, i Claudio Tida, tompondakan’i Madagasikara, amin’ny «môto». Raha tsiahivina, laharana fahatelo i Tida tamin’izany. Nambarany, nandritra ny fihaonana tamin’ny mpanao gazety, tetsy Andraharo, omaly, fa hiezaka ny hanao izay ho afany izy izay hitondra KTM SX-F 350. Hiara-dalana amin’ilay Reonioney, i Pascal Dorseuil, izy eto. Tsiahivina fa hihazakazaka amin’ny ekipan’ny Honda sy ny KTM izy miaraka amin’i Mathias Plantive sy i Lucas Robert, hitaingina ny Honda CRF 450.
Hatao ny asabotsy ny «prologue», hijerena izay manana ny fe-potoana tsara ka hametrahana ny toeran’ireo mpanamory, amin’ny fiaingana ny «Quatre heures honda 2019», ny alahady. Ankoatra ireo mpifaninana malagasy, hahatratra 10 ireo ekipazy avy atsy La Réunion ho avy hifaninana.
Hisy sokajy 13 ny fifaninanana ka anisan’ny vaovao ny «équipage mixte», iarahan’ny lahy sy vavy. Natao hitovy endrika amin’ny fifaninanana any «Le Mans» ny fiaingana, izany hoe, mipetraka amin’ny tany ny lohaliky ny mpanamory ary ny mpanamory mpanampy kosa, mitazona ny moto.
Tsiahivina fa ny Iarivo Moto Club (IMC) sy ny orinasa Madauto, eo ambany fiahian’ny FMaM, ny mikarakara ity «Quatre heures Honda 2019» ity.